Inkcubeko yokudibana | Jiangsu Shuangyang Medical Instrument Co., Ltd.
Inkcubeko yokudibana yintando yethu efanayo, amabhongo kunye nokusukelwa. Ibonisa umoya wethu owahlukileyo nowodwa. Okwangoku, njengenxalenye ebalulekileyo yokuphucula ukhuphiswano oluphambili lwenkampani, inokuphucula ukuhlangana kweqela kwaye ikhuthaze ubuchule babasebenzi.
Bonke abasebenzi, kubandakanya abaphathi beshishini, zezona zinto zixabisekileyo zenkampani yethu. Ngumsebenzi wabo onzima kunye neenzame ezenza iShuangyang inkampani yale nqanaba. E-Shuangyang, asifuni nje iinkokeli ezibalaseleyo, kodwa kunye neetalente ezizinzileyo nezisebenza nzima ezinokuthi zenze izibonelelo kunye neenqobo ezisemgangathweni kuthi, kwaye ngubani ozinikele ekuphuhliseni kunye nathi. Abaphathi kuwo onke amanqanaba mabasoloko benesiphiwo sokufumana abasebenzi abanobuchule. Sifuna iitalente ezininzi ezinomdla, ezinamabhongo, kunye nokusebenza nzima ukuqinisekisa impumelelo yethu yexa elizayo. Ke ngoko, kufuneka sincede abasebenzi abanakho ukubanakho kunye nokuthembeka ukufumana iindawo zabo ezifanelekileyo kwaye basebenzise izakhono zabo.
Sisoloko sikhuthaza abasebenzi bethu ukuba bathande iintsapho zabo kwaye bayithande inkampani, kwaye bayenze kwizinto ezincinci. Sikhuthaza ukuba umsebenzi wanamhlanje kufuneka wenziwe namhlanje, kwaye abasebenzi kufuneka basebenze ngokufanelekileyo ukufikelela kwiinjongo zabo yonke imihla ukuze bafezekise iziphumo zokuphumelela kubasebenzi nakwinkampani.
Simisele inkqubo yezentlalontle yokujongana nomsebenzi ngamnye kunye nosapho ukuze zonke iintsapho zikulungele ukusixhasa.
Ukunyaniseka nokuthembeka yeyona migaqo ilungileyo. Kwiminyaka emininzi, "ukuthembeka" yenye yemigaqo esisiseko eShuangyang. Sisebenza ngokuthembeka ukuze sikwazi ukufumana izabelo zentengiso "ngokunyaniseka" kwaye siphumelele abathengi "ngentembeko". Sigcina ukuthembeka kwethu xa sijongana nabathengi, uluntu, urhulumente kunye nabasebenzi, kwaye le ndlela iye yaba yinto ebalulekileyo engaphathekiyo eShuangyang.
Imfezeko yimigaqo esisiseko yemihla ngemihla, kwaye ubunjani bayo bunoxanduva. E-Shuangyang, sijonga umgangatho njengobomi beshishini, kwaye sithatha indlela esekwe kumgangatho. Ngaphezulu kweshumi leminyaka, abasebenzi bethu abazinzileyo, abakhutheleyo nabazinikeleyo bebeqhuba "ukuthembeka" benembopheleleko kunye nokuzimisela. Kwaye inkampani iphumelele izihloko ezinje nge "Enterprise of Integrity" kunye ne "Enterprise Enterprise of Integrity" ezinikezelwa yi-ofisi yephondo amatyeli aliqela.
Sijonge ukuseka inkqubo yokusebenzisana ethembekileyo kunye nokufezekisa iimeko zokuphumelela kunye namaqabane akholelwa nakwintembeko.
E-Shuangyang, ukuvelisa izinto ezintsha kungamandla ophuhliso, kunye nendlela ephambili yokuphucula ukhuphiswano oluphambili lwendibaniselwano.
Sisoloko sizama ukudala imeko-bume ethandwayo yokuyila, ukwakha inkqubo entsha, ukuhlakulela iingcinga ezintsha kunye nokukhuthaza umdla. Sizama ukutyebisa imixholo emitsha njengoko iimveliso zenziwe ntsha ukuhlangabezana neemfuno zentengiso kwaye ulawulo lutshintshiwe ukuze luzise izibonelelo kubathengi nakwinkampani. Bonke abasebenzi bayakhuthazwa ukuba bathathe inxaxheba kwizinto ezintsha. Iinkokeli kunye nabaphathi kufuneka bazame ukuguqula iindlela zolawulo lwamashishini, kwaye abasebenzi ngokubanzi kufuneka bazise utshintsho kwimisebenzi yabo. Ukutsha kufuneka kube sisiqubulo somntu wonke. Sikwazama ukwandisa iindlela ezintsha. Indlela yonxibelelwano yangaphakathi iphuculwe ukukhuthaza unxibelelwano olusebenzayo ukuze kukhuthazwe ubuchule. Ukuqokelelwa kolwazi kuyandiswa ngokufunda kunye nonxibelelwano ukuze kuphuculwe amandla okuyila.
Izinto zihlala ziguquka. Kwixesha elizayo, iShuangyang iyakuphumeza kwaye ilawule ubuchule ngokukuko kwimiba emithathu, okt isicwangciso sobumbano, indlela yombutho kunye nolawulo lwemihla ngemihla, ukuze kukhuthazwe "imeko-bume" evumayo kuphuhliso kunye nokuhlakulela "umoya wenguqulelo" ongunaphakade.
Umzekeliso uthi "ngaphandle kokubala amanyathelo amancinci angabonakaliyo, amawaka eekhilomitha akanakufikelelwa." Ke ngoko, ukuze siqonde ukuzibophelela kwethu kukugqwesa, kufuneka siqhubele phambili nokwenza izinto ezintsha ngendlela ephantsi, kwaye sihambelane nembono yokuba "iimveliso zenza inkampani ibalasele, kwaye umtsalane wenza umntu aphawuleke".
Ukulandela ukugqwesa kuthetha ukuba kufuneka simisele imilinganiselo. Kwaye isende indlela ende ekufuneka sihambe ngayo yokufezekisa umbono "wokuqaqambisa kuzisa ikratshi ngenzala yamaTshayina". Sijonge ukwakha olona hlobo lubalaseleyo kunye nolona luhlukileyo kuzwelonke. Kwaye kumashumi eminyaka ezayo, siza kunciphisa umsantsa kunye neempawu zamanye amazwe kwaye sizame ukufikelela kwangoko.
Uhambo lweekhilomitha eziliwaka luqala ngenyathelo elinye. Ukunamathela kwixabiso "lokuqhelaniswa nabantu", siya kuqokelela iqela labasebenzi abanobuqili, abazingisayo, abasebenzayo kunye nabanobuchule ukuba bafunde ngokuzimisela, benze izinto ngenkalipho, kwaye benze igalelo ngokukuko. Siza kugxila kumgangatho kwaye sigcine ingqibelelo xa sizabalazela ukugqwesa komntu kunye neshishini ukuzalisekisa iphupha elihle lokwenza iShuangyang igama elaziwayo lesizwe.